Vanopikisa Hurumende Voronga Kuratidzira muKupera kweMwedzi Uno.
Vanhu vachiratidzira muHarare. VaNgarivhume vanoti vanotarisira kuratidzira murunyararo.
Mapato anopikisa, masangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi pamwe nevamwe vemakereke vanonzi vari kuronga kuratidzira kwevana veZimbabwe nyika yose musi wa 31 Chikunguru, unove mwedzi uno, vachinyunyutya nekwavanoti kutadza kutonga kwehurumende yeZanu PF.
Mumwe wevari kutungamira hurongwa uhwu, uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vanoti hurumende yeZanu PF yakundikana kumisa huwori pamwe nekumutsiridza hupfumi hwenyika, izvo zvaisa vana veZimbabwe mukutambura kukuru.
VaNgarivhume vanoti vari kushanda nemapato ose anopikisa nemamwe masangano anomirira vana veZimbabwe mumapoka akasiyanasiyana mukuronga kuratidzira uku, vachiti kunyange nhengo dzeZanu PF dziri kukokwawo kuti dzibatane nevamwe vanoda hutongo hwakanaka munyika.
Asi mutauriri webato reMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kunge rakokwa zviri pamutemo, kunyange hazvo, sezvakataurwa nemutungamiri wavo VaNelson Chamisa neSvondo, vachabatana nevose vanoda kuti munyika muve neshanduko. Mutauriri weMDC-T, VaKhalipani Phugeni vatiwo bato ravo harisi muhurongwa hwekuratidzira uhwu.
VaNgarivhume vanoti vane hurongwa hwekuzivisa mapurisa nezvekuratidzira kwavo neChipiri, uye vanotarisira kuti vacharatidzira murunyararo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti kunyange hazvo bumbiro remitemo richibvumidza vanhu kuratidzira, zviri kurongwa nevanopikisa izvi kutungana kwembudzi.
VaMugwadi vanoti vari kurongwa kuratidzira vari kuziva kuti kune mutemo unorambidza kufambafamba kwevanhu nekuda kwechirwere che Covid-19 ndipo powoona vamwe vachida kupinda mumigwagwa kuti zvinhu zviparadzwe nekubiwa.
Vanoti vanochengetedza mutemo havasi kuzorega zvakadaro zvichiitika. VaMugwadi vanoti kunyange hazvo nyika iine matambudziko ekushaikwa kwezvakawanda, hapana asingazive kuti izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira.